Askari AMISOM: “Farxiyo Maanta Baashaal May, Maya, Maya”,!!! [ Xog Dhab ah] - iftineducation.com
Askari AMISOM: “Farxiyo Maanta Baashaal May, Maya, Maya”,!!! [ Xog Dhab ah]
aadan21 / February 15, 2014
iftineducation.com – Magaalada Muqdisho waa Caasimada Soomaaliya, in ku dhow 22-sano waxaa siyaabo kala duwan uga hulcaayey dagaallo leh wejiyo kala duwan.
Muqdisho hadda waxay xarun u tahay Dowlad KMG ah taasi oo ay sanadkii 2004-tii reer galbeedk kusoo dhiseen magaaladaNairobi, walow sanadkii 2008-dii dib lagu soo cusboonaysiiyey magaalada Jabuuti.
Quwadaha adduunka markii ay u caal waayeen dhibka Soomaalida waxay go’aan ku gaareen in Muqdisho la geeyo Ciidamo ka socda waddamo kamid ahAfrica, waxayna Soomaaliya ka fulinaayaan hawlgalka loogu magacdaray AMISOM.
Qaybtii ugu horaysay Ciidamadii waxaa Soomaaliya la geeyey sanadkii 2007-dii , waxayna ahaayeen Ciidamo ka socda Dowladda Uganda, wixii xilligaasi ka dambeeyey waa korortay tirada Ciidamada AMISOM, waxaana kusoo biiray Dowladdo cusub, sida Burund, Keny, Jabuuti iyo kuwo kale.
Dad badan ayaa ku mashquulsan hawlgalkaasi ay wadaan Ciidamada AMISOM,dagaalka ay la galeen Al shabaab iyo ilaalinta xarumaha Dowladda,hase yeeshee uu daah ka saaran yihiin dhibaatooyinka kale ee ay waddanka ku hayaan.
Ciidamada AMISOM waxay la qabsadeen dhaqanka Soomaalida, waxayna gaareen heer ay la laacdamaan gabdhaha Soomaalida oo xitaa ay carruur ka dhalaan.
Askta AMISOM waxay gabdhaha Soomaalida siiyaan lacag aad u yar, waxayna uga faa’iidaystaan iyaga oo ka samaysta wax kasta oo ay rabaan haba ugu badnaatee dhanka galmada sharci darada ah.
Taasi waxay keentay in qaar badan oo kamid ah gabdhaheenii sharafta badnaa ay u kala dhuuntaan xarumaha Ciidamada AMISOM si ay uga soo helaan wax yar oo lacag ah kadib marka sida la rabo looga soo sinaysto.
Waxaa taasi kasii daran saraakiisha AMISOM ee qorshahan fuliyaa waxay samaysteen rag Soomaali ah oo gabdhaha uga soo qaada magaalada, kadibna ugu keena xeryaha ay ku jiraan, kuwaasi oo marka ay hawsha fuliyaan la siiyo wax yar oo lacag ah.
Arrinta ugu daran waxay dhacday maali maal maha kamid ah ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde oo kamid ah goobaha ay ilaaliyaan Ciidamada AMISOM waxa isku raacnay aniga iyo rag kale oo Odayaal ah, waxaa na hor socotay gabar yar oo da’ahaan jirta 18-sano.
Markii aan gaarnay albaabka ugu horeeya ee laga galo garoonka ayaa waxaa aad u qayliyey askari Ugandhiis ah oo albaabka joogay, aad ayaan uga naxnay waxa uu ku qaylinaayey oo ahaa Afsoomaali jajab ah.
Isaga oo la hadlaaya gabadhii naga horaysay ayaa waxa uu hal mar lasoo booday “Farxiyo maanta baashaal may!!, Farxiyo maanta siil maya iyo ereyo”,!! kale oo aan fahmi waynay.
Intaasi kadib waxaan ogaanay dad meesha joogayna ay inoo sheegeen in gabadha meesha maraysay ay u socotay sidii ay jirkeeda uga soo iibsan lahayn Ciidamada AMISOM, kadibna ay usoo qaadan lahayd lacag yar oo aan wax badan u qaban karin.
Dhibkaasi gabdhaha Soomaalida ay kala kulmaan Ciidamada AMISOM ilaa iyo iminka ma jirto cid u istaagtay sidii wax looga qaban lahaa, waana arrin marka aad u kuur gasho kugu reebaysa uur ku taallo aad u xun.
CiidamadaUgandaoo kamid ah kuwa AMISOM waxay caado iyo dhaqan u leeyihiin fara xumayn gabdhaha dhibaataysan marka laga tusaale qaato tii ka dhacday dalkaCongooo sagaashamaadkii nabad ilaalin loo geeyey.
Madaxweynaha Uganda Yuweri Musaveni oo Ciidamo loo soo diraayey Ciidamada kula hadlaayey gudaha dalkiisa waxa uu kula dar daarmay in ay nabad geliyaan gabdhaha Soomaalida, hase yeeshe taasi mid hadda hir gelaysa.
Dadka uu saaran yahay xilka wax ka qabashada arrintaan waa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka, Dowlad, rayid iyo cid kasta oo damiir leh ayaa looga baahan yahay in ay wax ka qabato.
Nin Ciraqi Ah Oo Naftiisa Ku Iibinaya Xaraash,Balse Hal Shuruud Ayuu Wataa